खोपको हाहाकार र भारतको खोप उत्पादक कम्पनीहरूको अवस्था : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारखोपको हाहाकार र भारतको खोप उत्पादक कम्पनीहरूको अवस्था
खोप के हो र यसको आवश्यक्ता किन पर्छ त्यसको वास्तविकता यतिबेला सबैमाझ खुलेको छ अर्थात् कोरोनाले पूरै विश्व ग्रसित भएपछि । पछिल्लो दुई वर्षदेखि हामीमाझ कोरोना काल जारी रहेको छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुक जुन देश खरिदमा कम र अनुदानमा बढी आस राख्छन् त्यो देशमा त झन् यो कोरोनाले बढी नै समस्या निम्त्याएको छ । यतिबेला अनुदान त के पैसा तिरेर समेत खोप पाइरहेको अवस्था छैन ।
एकपटक हामी कल्पना गरौं । यदि हामीले पोलियो थोपा नलिएको भए ? टिटनासको सुई बच्चामै नहालिएको भए ? हेपाटाटिसको खोप नलगाएको भए आज हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो होला । हो ठीक यस्तै अनिवार्य आवश्यक्ताको विषय बनेको छ । यतिबेला कोरोनाको खोप । खोप लगाएमा कोरोनाबाट ९५ प्रतिशत सुरक्षित रहने र कहीँ कोरोना लागि नै हाल्यो भने ९५ प्रतिशत उनको ज्यानमा कुनै खतराबाट सुरक्षित रहन्छ । विश्वव्यापी रूपमा बनाएको खोपको ६० प्रतिशत उत्पादन भारतमा हुने गरेको छ । तर, अमेरिकापछि कोरोनाको भयावह अवस्था सबैभन्दा बढी भारतमै पाइएको छ ।
खोपहरूको उत्पादन गर्ने र सम्पूर्ण विश्वभर यसको आपूर्ति गर्नेमध्ये सबैभन्दा ठूलो संस्थान हो सिरम संस्थान । भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा रहेको यो फार्मा कम्पनीले संसारलाई कोभिड खोप दिने दौडमा यतिबेला ठूलो नेतृत्व लिएको छ । सिरम इन्सिच्युट (एसआईआई) मात्र यो एक नाम होइन । बरु प्रत्येक घरमा यसलाई चिनिन्छ, यो विश्वमा सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता हो । यो कम्पनीले दैनिक ३० लाख बढी खोपको उत्पादन गर्दै आएको छ । यो कम्पनी भारतको निजी कम्पनी हो सरकारी होइन । बेलायतको एक पारिवारिक कम्पनी र भारतमा रहेको पुणेवाला ग्रुपले यो कम्पनीको सञ्चालन गर्दै आएको छ । अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेका जस्ता औषधि रिसर्चर कम्पनीसँग मिलेर खोपको निर्माण गर्ने कार्य सिरमले गर्दै आएको छ ।
कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पुनावालाका अनुसार १ वर्षभित्र पुरै विश्वलाई सिरमले खोप दिइसक्नेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको समेत एउटा अंगका रूपमा मानिने सिरम खासगरी गरिब मुलुकमा खोप दिन बढी प्रभावकारी संस्थान हो । किनकि डब्लूएचओले यो संस्थानसँग खरिद गरी गरिब मुलुकलाई दिने गरेको छ । यो फर्मा दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बढी परिणाममा खोप उत्पादन गर्ने गरेका कारण डब्लूएचओले सिरमसँग सम्झौता गरेर पुरै विश्वलाई दिने गरेको छ ।
केही महिनाअघि केही पत्रकारहरू सो संस्थान पुगेका थियौं । संस्थाको विस्तृप्त अध्ययन पनि गरेका थियांै । प्लान्टको अवलोकन भ्रमणदेखि संस्थाको इतिहाससम्मको बारेमा जानेका थियौं ।
विश्वव्यापी रूपमा बनाएको खोपको ६० प्रतिशत उत्पादन भारतमा हुने गरेको छ
सिरम संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अदार पुनावाला भन्छन्, ‘हामीले विगतको अनुभवमा आधारित रहेर अक्सफोर्ड वैज्ञानिकको खोजमा अधारित रही खोप उत्पादन ग¥यौं । जोखिम लियौं । त्योबेला विश्वका सरकारले खासै ध्यान दिएन । तर आज आएर हामी दवाबमा छौं । चौतर्फी दबाबमा छौं, थेग्न नसक्नेगरी विश्वभरबाट खोपको माग छ,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले हामीलाई त्योबेला हौसला दियो, हिम्मत दियो र हामी बढी नै परिणाममा खोपको उत्पादन ग¥यौं, जुन भारत सरकारमार्फत नेपालसमेत धेरै देशहरूले अनुदानमा पनि पाए । त्यसपछि नेपालसमेत धेरै देशहरूको अग्रिम अडर हामीले लियौं तर पछि भारतमै अवस्था भयावह भएपछि अन्य देश पठाउन सकिएन । यता सुप्रिम कोटले समेत रोक लगाइदियो । भारत सरकारले समेत त्यस्तै खालको नीति ल्यायो ।’
अक्सफोर्ड र एसआईआईबीचको सम्झौता
अक्सफोर्ड र एसआईआईले सँगै मिलेर मलेरिया खोपसमेत तयार पारिसकेका छन् । सिरम इन्सिच्युट एक निजी कम्पनी भएकाले पुनावाला र तिनका वैज्ञानिकबीच छिटो निर्णय लिने अवस्था हुन्छ । सरकारीजस्तो धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । पुणेवाला भन्छन्, ‘तर रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । एसआईआईले कोभिड भ्याक्सिन परियोजनामा सुरुमा २६० मिलियन डलर लगानी गरेको थियो र बाँकी कोष बिल गेट्स र केही अन्य देशहरू जस्ता मानिसहरूले जुटाए ।’
कम्पनीका अनुसार अप्रिल २०२० मा अदार पुनावालालाई मात्र आफूलाई चाहिने कुराको सोच थियो । पुनावालाले भने, ‘हामीले समयमै ६ सय मिलियन भायल (औषधि राख्ने सीसी) किनेका थियौं र त्यसलाई हाम्रो गोदाममा भण्डार गरिसकेका थियौं । यो हाम्रो रणनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा थियो । जसका कारण जनवरीमा हामी ७०÷८० मिलियन डोज तयार ग¥यौं’ उनले भने, ‘म चाहान्छु कि बाँकी कम्पनीहरूले यस्तो जोखिम उठाएको भए, आज संसारले धेरै खोपहरूको मात्रा पाउँथे ।’ अदार पुनावाला विश्वव्यापी रूपमा खोपहरूको नियमनको प्रणाली र उनीहरूमा समन्वयको अभावको आलोचना गर्दै टीकाको ढिलाइ आंैल्याए । उनले भने, ‘विश्वका मेडिसिन र हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए), युरोपियन मेडिसिन एजेन्सी (ईएमए) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको फुड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) र विश्वका अन्य नियामक एजेन्सीहरूसँग सहमत हुनुपर्छ । सकेसम्म चाँडो गुणस्तरको मानक हुनुपर्छ । योसँगै गर्न सक्नुपर्छ ।’
पूनावालमा कोभिडको नयाँ भेरियन्टबारे धेरै चिन्तित देखिँदैन् । उनी भन्छन्, ‘अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोप लिने जोसुकैले पनि अस्पतालमा जानुपरेको छैन । भेन्टिलेटरमा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । न खोप लगाएकाहरूले अरूलाई भाइरस सारेका छन् । बरु यसले तपाईको जीवनलाई बचाएको छ ।’
भारतको सिरम इन्सिच्युट अफ इन्डिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप अभियानको हिस्सा हो, जसको लक्ष्य ३ सय करोड मानिसलाई अगस्टसम्म कोभिडको खोप लगाएको छ । तर, ब्लुमबर्गको रिपोर्टअनुसार कोभिड खोप लिन हाल योग्य ५६ प्रतिशत व्यक्ति मात्र खोप लिन अगाडि आएका छन् ।
पुनावालाले भने, ‘केही सेलिब्रेटी र गैरविज्ञहरूले भनेका छन् कि कोभिड खोप सुरक्षित छैन । धेरै व्यक्ति कोभिड खोपबारे हिचकिचाएका छन् । त्यसकारण म सेलिब्रेटीहरू र सोसल मिडियामा ठूलो प्रभाव भएका अन्य सबै व्यक्तिलाई अनुरोध गर्दछु कि उनीहरू धेरै जिम्मेवारीका साथ बोल्न र यी विषयमा तथ्यलाई नबुझीकन कुरा नगरोस् ।’
विश्वव्यापी मागको ६० प्रतिशत भारतीय खोप निर्माता
विश्वव्यापी रूपमा बनाएको खोपको ६० प्रतिशत उत्पादन भारतमा हुने गरेको छ । तर, अमेरिका पछि कोरोनाको भयावह अवस्था सबैभन्दा बढी भारतमै पाइएको छ । भारतले आफ्ना जनतालाई मात्र खोप दिनुपर्ने छैन बरु उसलाई विश्वका अन्य देशहरूमा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
के भारतले यो माग पूरा गर्न सक्छ ? भारतले कति खोप उत्पादन गर्न सक्छ ? भारतमा अहिले दुईवटा खोप अनुमोदन भइसकेका छन् । कोभिसिल्ड जसले अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको सम्झौतामा सिरमले बनाउँदै छ र अर्को एउटा कोभ्याक्सिन । हाल केही परीक्षण पनि भइरहेका छन् । जुन अन्य खोप पनि भारतमै उत्पादन भइरहेको छ ।
भारतका औषधि उत्पादक कम्पनीले पछिल्ला महिनामा उत्पादन बढाएका छन् । भारतको सिरम इन्सिच्युट जुन सबैभन्दा ठूलो उत्पादक पनि हो उसका अनुसार सिरमले प्रत्येक महिना ६ देखि ७ करोड खोप उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
भारत बायोटकको कोभ्याक्सिन
भारत बायोटक हैदराबादमा रहेको औषधि उत्पादन गर्ने अर्को फार्मा कम्पनी हो यसले बनाएको कोभ्याक्सिन अलिकति झन्झटिलो र कडा खालका छन् । समाचार एजेन्सीका अनुसार बायोटेकले भनेको छ कि यसले वार्षिक ७० करोड खोप उत्पादन गर्नेछ । उसले अन्य देशहरूका लागि प्रतिखुराक २० डलर तय गर्ने योजना बनाएको छ । यो कम्पनीले भारतमा प्रतिडोज १० डलरको मूल्य राखेका छन् । यो कम्पनीका रसियाको एउटा कम्पनीसँग मिलेर आफ्नो उत्पादन गर्दै आएको छ ।
भारतलाई कति चाहिन्छ ?
भारत सरकारले जुलाईको अन्त सम्म ३ सय करोडलाई खोप दिने बताएको छ । जुलाई महिनामा ६० करोड जनतालाई खोप लगाउने योजना छ । जुन प्रत्येक महिना ९ करोड खुराक चाहिन्छ । अहिले त्यहाँ विभिन्न राज्य सरकार र केन्द्र सरकाबीच द्वन्द्व जारी रहेको छ । विपक्षी दलदेखि सर्वोच्च अदालतसम्ममा केन्द्र सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने भ्याक्सिन र औकसिजन राजनीति त्यहाँ जारी रहेको छ ।
विश्वमा भारतको भूमिका के हुनेछ ?
भारतको सिरम संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा समर्थित कोवाक्स योजनाको अंग पनि हो । यसको उद्देश्य मध्यम आय भएका देशहरूमा खोप उपलब्ध गराउनु हो । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा, सिरम संस्थानले यस योजनाअन्तर्गत २ सय मिलियन डोज प्रदान गर्ने भनेको थियो । यो अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन वा यूएस नोभेक्स खुराक हुन सक्छ । भारतको सिरम संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अदार पुनावालाले केही दिनअघि बीबीसीलाई बताएका थिए कि यो सम्झौता ९० करोड डोजसम्म बढाउन सकिन्छ । यदि यो भयो भने, भारतको सिरम संस्थानको प्रतिबद्धता १ अर्ब डोज हुनेछ ।
सिरम संस्थान कोरोनाविरुद्धको ‘कोभसिल्ड भ्याक्सिन’ उपलब्ध गराउने सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो
बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै कम्पनीले भनेका थिए कि यो उत्पादन प्रतिमहिना १० करोड डोजमा बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । कोभ्याक्स योजनाको अतिरिक्त, भारतको सिरम संस्थानले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोप आपूर्ति गर्न धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय वाणिज्य सम्झौता गरेको छ । यस महिनाको सुरुमै पुनावालाले भने कि यी खोपहरू निर्यात नहुने सर्तमा अनुमोदित भएको थियो तर उनको भनाइअनुसार यो भ्रम हो ।
उता, नेपाल, बंगलादेश, भुटानले चिन्ता व्यक्त गरेपछि भारत सरकारले स्पष्ट गरे कि निर्यातको अनुमति दिइनेछ । बंगलादेशसँग मासिक ३ करोड खुराक दिने सम्झौता गरेको छ ।
दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक देश भएको नाताले छिमेकीहरू र बाँकी विश्वप्रति प्रतिबद्धताप्रति पूर्ण सजग छ । यसबाहेक कम्पनीले साउदी अरेबिया, म्यानमार र मोरक्कोसँग पनि सम्झौता गरेको छ । यद्यपि कति खोप, कति लामो समयसम्म उनीहरूलाई आवश्यक हुन्छ, यो अझै स्पष्ट छैन ।
नेपाल, ब्राजिल र श्रीलंकाले पनि भारतमा बनाइएका खोपको आसमा छन् । तर, पुनावालाले भने कि उनको प्राथमिकता आन्तरिक माग पूरा गर्नु नै हुनेछ । ‘हामीले प्रारम्भिक आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि चाँडै नै अरू देशमा निर्यात गर्न थाल्नेछौं ।’ संसारभरि यो पनि चिन्ता छ कि त्यहाँ सिसीको पनि कमी हुन सक्छ । यद्यपि सिरम संस्थानका अनुसार उनले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कमीको सामना गरेको छैन ।
अदार पुनावाला: घोडाको व्यापारदेखि भ्याक्सिन उद्योगको सम्राटसम्मको यात्रा
जब संसारभरि कोरोना खोप तयार गर्ने र मानिसमा परीक्षण गर्ने अध्ययन हुँदै थियो तब हामी पुणेको सिरम संस्थानको भ्रमण गरेका थियौं । कोरोेनाविरुद्ध खोप बनाउन भारतको सिरम संस्थानले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकासँग सम्झौता गरेर भ्याक्सिन तयार गरेको छ । सिरम संस्थान भारत र विश्वका अन्य देशमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो ।
दिनभरि हामीले सिरम इन्सिच्युट प्लान्टको भ्रमण ग¥यौं । यहाँ कैयौं खोप उत्पादन भइसकेकाले यस संस्थानको विश्वमा अर्कै स्थान छ । सिरम संस्थानका अधिकारीले हामीलाई ब्रिफिङ गर्दै घुमाए । सिरम क्याम्पभित्र एउटा फ्लाइओभर छ जुन सिरम संस्थानभित्र एक मात्र निजी सडक थियो जुन सिधंै त्यस ठाउँमा लगिरहेको थियो । त्यहाँ पुग्नु पहिले एउटा विशाल हेलिप्याड देख्यौं । त्यहाँ हेलिकोप्टर पनि उभिएको थियो ।
त्यहाँ ठूलो विमान पनि देखियो । त्यो विमान चार्टर्ड विमान थिएन तर एयरबस ३२० विमान थियो । हामीले बुझ्न सकेनौं कि हामी सिरम प्लान्टभित्र थियौंं । कसरी अचानक एयरपोर्टमा पुग्यौं ? तर सँगै आएका अफिसरले हामीलाई भने, ‘यो हाम्रो कम्पनीका प्रमुख अदार पुनावालाको कार्यालय हो । यो विमान स्थायी रूपमा यहाँ रहन्छ र पुनावालाले यसलाई दोस्रो कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।’
पुनावाला परिवार १०औं शताब्दीमा बेलायती साम्रराज्य समयमा पुणे आएका थिए । त्यो बेला कयौं पारसी परिवार बेलायती भारतमा बसोबास गरे र प्रशासनदेखि लिएर व्यापारसम्म विश्वमा स्थापित भए । पारसी परिवार बसोबास गर्ने सहरको नाम तिनीहरूको नामबाटै स्थापित भएको थियो । उही तरिकाले आदारको परिवारलाई पुनावाला राखियो । सुरुमा यो परिवार निर्माण व्यवसायमा सक्रिय थियो । तर यो परिवार घोडाको व्यवसायमा स्थापित नाम थियो । आज पनि यो परिवार घोडाको व्यवसायबाटै चिनिन्छन् । घोडाको व्यापार अदारका हजुरबुबा सोली पुनावालाले सुरु गरेका थिए ।
काठमाडौं । आगामी सोमबारभित्र कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमार्फत ‘जोन्सन एन्ड जोन्सन’को १५ लाख मात्रा खोप नेपाल आउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार...
जिल्लाको प्रबेश नाकामा कडाई सदरमुकाम बेसीशहर सुनसान लमजुङ । कोरोना भाइरसका कारण जिल्लाको प्रवेश नाकामा हेल्थ डेक्स राखेर यात्रु्को चेकजाँचमा कडाई गरिएको...
काठमाडौंमा हल्का वर्षा, बुधवारपछि मात्रै मौसम खुल्ने
मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको अभियान सञ्चालन गरौँ : सञ्चारमन्त्री
१३ वर्षिया बालिका बलात्कार गर्नेलाई जोगाउन नेतादेखि प्रहरीसम्म सक्रिय